नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (बुधवार, १ फागुन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (बुधवार, १ फागुन २०७५)
on: February 12, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (बुधवार, १ फागुन २०७५)
वित्तीय विवरणले प्रभाव नपरेको माघ महीना
माघ २९, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से शून्य दशमलव ६७ अंक घटेर १ हजार १ सय २८ दशमलव १९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत घटेको छ । १ हजार १ सय २८ दशमलव ८८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक एक घण्टामा बढेर १ हजार १ सय ३२ दशमलव ३७ विन्दुसम्म पुगेको थियो । माघ महीनाको अन्तिम दिन भएकाले सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरुले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणहरु सार्वजानिक गरेका छन् । धेरै जसो बीमा समूहको वित्तीय विवरण नाफामूलक सार्वजानिक भएको छ । जसले गर्दा बीमा समूहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन वित्तीय विवरण प्रभाव परेपछि ६ समूहको परिसूचक बढ्न पुगेको हो ।
मंगलवार रू. १९ करोड ४१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिन सोमवारको तुलनामा कारोबार रकम ४ दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ । मंगलवार ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घटेर २ सय ४० दशमलव २० विन्दुमा पुगेको छ ।
कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा कुनको घट्यो ? कस्को कारोबार उच्च ?
कारोबार भएका १ सय ६४ कम्पनीमा ६१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६८ कम्पनीको घटेको छ । साथै, ३५ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । यस दिन लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि आएको छ । जेबिल्स फाइनान्सको शेयर मूल्य ७ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १० ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ४१ मा कारोबार भएको छ । दोस्रोमा चौतारी लघुवित्तको शेयर मूल्य ४ दशमलव ८२ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ३ सय २६ मा कारोबार भएको छ । साथै, महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर मूल्य ३ दशमलव ४८ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ६६ मा कारोबार भएको छ ।
मंगलवार प्रभु बैंकको संस्थापक तर्फको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । बैंकको प्रतिकित्ता रू. १ सय ५० मा रू. ३ करोड १० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता रू. २ सय ३१ मा रू. ८७ लाख ९० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।